एमाले सांसद शान्ता चौधरी र पूर्वसचिव भीम उपाध्यायवीच चल्यो जुहारी - Reel Mandu
एमाले सांसद शान्ता चौधरी र पूर्वसचिव भीम उपाध्यायवीच चल्यो जुहारी
काठमाडौं । इन्जिनियर समेत रहेका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छन् । २ लाख ५ हजार भन्दा धेरै फलोअर बनाउन सफल भएका उनले समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्नो ज्ञान, विश्लेषण प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा देखिएको फोहोरी राजनीतिको विषयमा व्यंग्य हान्ने, नेताहरुका गलत कामहरु सार्वजनिक गर्ने अथवा अन्य विविध विषयमा उनले स्टाटस लेख्छन् । दिनमा बीस भन्दा बढीसम्म उनले स्टाटस लेख्छन् ।
मेलम्ची खाजेपानी आयोजनामा लामो समय काम गरेका उनले आफू सेवा निवृत भएपछि फेसबुक बढी चलाउन थालेका हुन् । उनले दिने अभिव्यक्ति केही मिडियाहरुमा कन्टेन्ट पनि बन्छन् । केही व्यक्तिहरु उनका डाइ हार्ट फ्यान छन् भने केही व्यक्तिहरु उनका कट्टर विरोधी छन् । त्यतिमात्र नभएर उपाध्यायले आफूलाई विरोध गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गए उनकै भाषामा सोत्तर समेत पार्ने गरेका छन् । त्यसको अर्थ सिधै ब्लक गर्ने गरेका छन् ।
विवाद र प्रशंसा दुवै पाएका उनले पछिल्लो समय नेपालमा ब्याण्ड गरिएको गाँजाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् उनकै सक्रियतामा नेपालभर गाँजा सचेतना अभियान चलिरहेको छ । उनकै कारण थुप्रै विषयले भाइरल बन्ने गरेका छन् । उदाहरणको निम्ती उनले केही बर्ष अघि एक सरकारी मोटरसाइकलमा सवार कर्मचारीको फोटो उनले फेसबुकमा राखेसँगै भाइरल हुन थालेको थियो ।
पछिल्लो समय नेकपा एमाले विवाद निकै चर्कदो छ । अझ २ भदौमा एमाले बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले एमाले पार्टी विभाजन गरी एमाले समाजवादी गठन गरेपछि एक अर्का पक्षका नेताहरु गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । हुन त कम्युनिष्टहरु गाली गलौच गर्नमा पनि एक्सपर्ट नै हुन्छ । काँग्रेस, राप्रपाहरु पनि फुटेका छन्, तर कम्युनिष्टहरुले जस्तो तल्लो स्तर सम्म पुग्ने गरी गाली बेइज्जती भने गर्दैनन् ।
यसै विषयमा एमाले सांसद शान्ता चौधरीको प्रसँग पनि रोचक छ । उनलाई नेता माधव कुमार नेपालले सांसद बनाएको भनिन्छ । पूर्वकमलरी रहेकी उनलाई राजनीतिमा ल्याउन माधव कुमार नेपालकै भूमिका रहेको स्वयं उनले पनि स्वीकार गरेकी छिन् । तर अहिले पार्टी विभाजन हुँदा चौधरीले उनलाई साथ दिइनन् । जसको कारण उनलाई धेरैले आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
यसैप्रसंगमा भीम उपाध्यायले पनि एक स्टाटस लेखे । शान्ता चौधरी र नेता नेपालको अलिक पूरानो फोटो शेयर गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘आफ्नै उद्दारकर्ताको पद आजै खोस् भन्दै उदण्डता गर्ने यी पूर्वकमलरी सांसद । माधव नेपालले ८ बर्षको उमेरदेखि २५ बर्ष सम्म जमिन्दारको घरमा बिनातलव कमलहरी गरिरहेकी शान्ता चौधरीलाई टपक्क टिपेर समानुपातिक सांसद बनाइ सिहदरबार छिराएका हुन्। हिजो यी सांसद शान्ता चौधरी माधव नेपालको सांसद पद खारेज गरिहाल भन्दै सभामुखको कार्यकक्षमा चोर औला देखाउदै धर्ना दिनेमा अग्रपंक्तिमा थिइन् । आजसम्म सोच परिवर्तन भएनछ।‘
उनले यो स्टाटस लेखेको दुई घण्टामा तीन हजार रियाक्ट आएका छन् भने कमेन्ट पनि करिब एक हजार आएका छन् । त्यसमा सांसद चौधरीले नै कमेन्ट गरेकी छन् । उपाध्यायले लेखेको स्टाटसमा आपत्ति जनाउँदै उनले भनेकी छन्– ‘धन्यवाद छ तपाइलाइ ! मेरो बारेमा एउटा तुच्छ सोच सोचेको मा , मलाइ उहाले एमालेमा ल्याउनु भएको हो अरुपार्टिमा लाग्नु पर्छ भनेर होइन ,जुन ठाउमा उहाले ल्याउनु भयो म त्यहि ठाउमा छु उहा जाहा जाहा जानुहुन्छ म त्यहा त्यहा जान सग्दिन मफ ,गर्नुस एउटा कमहलरी देशको कानुन बनाउन आएको तपाइ जस्तो मान्छेले काहा पचाउन सक्नुहुन्छर मैले त्यो कुरा राम्रोसङ बुझेको छु , एउटा कमहालरि सधै कमहलरी नै हुनु पर्ने हो तपाइको लेखाइमा ? रहयो कुरा यो फोटोको यो फोटो जतिबेला हाम्रो कमैयाहरुको आन्दोलन को हो माधब कमरेडले मुक्त गर्न लको होइन !’
त्यही कमेन्टमा एक हजार जनाले रियाक्ट गरेका छन् भने करिब दुई सय जनाले रिप्लाई गरेका छन् । जसमा केहीले उपाध्यायको समर्थन गरेका छन् भने केहीमा चौधरीको समर्थन देखिन्छ । फेरी उपाध्यायले रिप्लाइ गर्दै भनेका छन्– ‘धन्यवाद। म कसैको विचार फेर्न हैन, ब्यवहारको देखेर चर्चा गर्ने गरेको छु। विचार जहिले पनि ब्यावहारिक भईरहोस्। राजनीति जुन दलमा बसेपनि सौम्य शालिन र अनुकरणीय होस्। कसैलाई थर्काउने, हुलहुज्जत गर्ने र कसैको अर्ह्रौटे हुन मन छ भने जागिर खानुपर्छ, नेता बन्न सकिन्न। कुनै एउटाको पुच्छर बने ठिक हुदैन, कसैको पनि पुच्छर बन्न हुदैन। तर मलाई मतलब भएन, मेरा जनप्रतिनिधि तगडा हुन्, स्वतन्त्र र विवेकी हुन्, कसैको दास नहुन् भन्ने मेरो झिनो आश हो जो पूरा हुदैन। विगत गौरवमय हुन वर्तमान गौरवमय बन्नुपर्छ। ईतिहास सम्झदाको मिठास वर्तमानको सफलतामा हुन्छ । नत्र ईतिहास तिक्त हुन्छ। सबैका तितामिठा ईतिहास हुन्छन्, सफलताले तिनलाई गौरवगाथाको माला पहिराईदिन्छ। तपाईमाथि गौरव थियो तर यसमा अहिले खिया लाग्यो। तपाईकै प्रतिक्रियाले यसमा झन् पुष्ट्यायो। टिक्नुहोला आफ्नो अडानमा, हामी पर्खने छौँ।’
यस विषयमा उपाध्याय र चौधरी दुवैको समर्थनमा कमेन्ट आएका छन् । माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्न लागेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न भनेर संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेका छन् । तर ती कारवाहीलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले होल्ड गरेर राखेका छन् । चाँडै पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्न सभामुखलाई दबाब दिन चौधरीको नेतृत्वमा एमाले नेताहरु सभामुख सापकोटाको क्याबिनमा गएका थिए । सोही प्रसंगमा उपाध्यायले स्टाटस लेखेका थिए ।